Healthy – Yay Thu Ma
မနက်ခင်းတွေမှာ တက်တက်ကြွမရှိပဲ တော်တော်နဲ့မထနိုင်တဲ့ နေ့ရက်မျိုးတွေကို အားလုံးပဲတွေ့ကြုံဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရော သတိထားမိရဲ့လား။ မနက်ပိုင်းတွေမှာ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ညဘက်တွေမှာ အိပ်ရာဝင်တာ နောက်ကျတာမျိုးတွေကြောင့်ပဲ မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားအကြောင်းတွေလည်း ရှိနေသေးတာကြောင့် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ မှောင်နေတဲ့အခန်း အရမ်းမှောင်နေလွန်းတဲ့အခန်းထဲမှာ အိပ်နေတာမျိုးတွေက တကယ်တော့စိတ်ကို ထိုင်းမှိုင်းစေပြီး မနက်ခင်းတွေကိုရောက်လာတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း မနက်ခင်းရဲ့အလင်းရောင်တွေကိုမမြင်ရတော့ပဲ အိပ်ချင်စိတ်တွေက ထိန်းမရတော့ပဲ အမြဲတမ်းအိပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပြီး မဖြစ်မနေထရတဲ့အချိန်မှာတော့ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေစေတာပေါ့။ အိပ်ယာဝင်နောက်ကျတာအိပ်ယာဝင်တာနောက်ကျရင်တော့ ဘယ်သူမဆို တက်တက်ကြွကြွနဲ့တော့ နိုးမလာနိုင်ပါဘူး။...
ဆေးနှင့် နွားနို့ တွဲသောက်မိလျှင်
ဆေးနှင့် နွားနို့ တွဲသောက်မိလျှင် ဆေးဝါးများကို နွားနို့ နှင့်တွဲဖက်မသောက်သင့်ကြောင်း စာဖတ်ပရိတ်သတ် များ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် မသောက်သင့်ပါသလဲ? ရောဂါတစ်ခုခုအတွက် ခံတွင်းမှမျိုချ သောက်သုံးလိုက်သော သောက်ဆေးများကို အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်ဓာတ်ပြု၍ အစာချေဖျက်ပေးပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာရောဂါထံသို့သွေးစီးကြောင်းများမှတဆင့် အနာနှင့်ဆေးတွေ့ စေ၍ ဝေဒနာသက်သာ လာစေပါတယ်။ နွားနို့ တစ်မျိုးတည်းသာ သောက်ပါက နို့ ထဲတွင်ပါရှိသော ကယ်လ်စီ ယမ် နှင့် အဟာရဓာတ်တို...
ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ မူး သွားတာ ဘာကြောင့်လဲ … ?
ထိုင်နေရာကနေ ရုတ်ခနဲ ထလိုက်ရင် ရိပ်ခနဲ မိုက်ခနဲ ခေါင်းမူး ပြီး လူက ယိုင်သွားတာမျိုး လူအတော်များများ ကြုံဖူးကြ လိမ့်မည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်း သည် သိပ်မစိုးရိမ် လောက်သော ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ဖြစ်သော်လည်း သူ့နောက် ဆက်တွဲများကား စိုးရိမ်စရာရှိ သဖြင့် ထိုသို့ ဖြစ်ပါများလာ လျှင်တော့ မပေါ့ဘဲ ဂရုစိုက်ကြဖို့ လိုမည်။ အဲဒီလိုဖြစ်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ် စနစ်မှာ တစ်ခုခု...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ သွေးထဲတွင် သကြားဓာတ် မြင့်မားခြင်းကြောင့် ကလေး၌ နှလုံးချို့ယွင်းနိုင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် နှလုံးချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သိထားသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအဆင့်သို့ မရောက်သေးသော အဆင့်ဖြစ်သည့် သွေးထဲ သကြားဓာတ်ပမာဏ မြင့်မားခြင်းကြောင့်လည်း ကလေးငယ်၏ နှလုံးတွင် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ရပ်က ဖော်ပြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည် ဆီးချိုရောဂါအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် စစ်ဆေးရန်လိုသည်ဟု ကလေးနှလုံးအထူးကုဆရာဝန် ဘယ်ရီဂိုးဘာ့ဂ်ကပြောသည်။သန္ဓေသားဘဝတွင် နှလုံးသည် ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း မရှိသဖြင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဘယ်ရီဂိုးဘာ့ဂ်ကပြော သည်။ယင်းသည် ကြုံတွေ့မှုအများဆုံး မီးဖွားမှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး...
ခေါင်းအုံး ခေါင်းအုံးတွေကို သတိထားပါ
အသက်(36)နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Stewart Arms ဟာ ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေး သမား ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးပန်းတာပဲလို့ ယူဆပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆနေခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ ဒဏ်ရာက မသက်သာလို့ သူ့မှာ အဖျားရောဂါရှိနေပြီထင်ကာ ဆေးခန်းကို သွားပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာရဲ့ စစ်ဆေးမှု မှာလည်း တစ်ခြားထူးခြားမှုကို မတွေ့ရလို့ အဖျားကျဆေးကို ပေးပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သွေးအဖြေကလည်း ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်အကြာမှာပဲ...